Mheni Arrester / Insulator Yekuedza Equipment Manufacturers |China Mheni Arrester / Insulator Yekuyedza Equipment Suppliers & Fekitori
GDYZ-302 Zinc Oxide Arrester Live Tester chishandiso chakakosha chinoshandiswa kuyedza kushanda kwemagetsi kweZinc Oxide Arrester.
GDUD-PBI Ultrasonic Flaw Detector yeMagetsi Equipment
Ultrasonic Flaw Detector chinhu chisinga paradza chekuyedza chinoshandiswa kuona mukati memechani kukuvadzwa kwemidziyo yemagetsi.
GDUD-PTM Ultrasonic Flaw Detector yeMagetsi Power Tower
Ultrasonic Flaw Detector chishandiso chisiri-chinokanganisa chekuyedza chinoshandiswa kuongorora chirema uye nzvimbo, kuyerwa kwemadziro, nezvimwewo uye yakakodzera kune akasiyana mahombe workpieces uye yakakwirira resolution kuyerwa zvinodiwa.
GD-610B Insulator Inotadza Detector
Iyo modhi GD-610B inoshandiswa kuona zvikanganiso zvema insulators uye kutsvaga zvikanganiso muchiteshi chemagetsi, substation isina simba rekucheka.Iyo zvakare inogona kushandiswa kuona PD kuona, corona discharge yekuona, kubuda kwekuona kwemagetsi emagetsi.
GDJW-40B inogona kushandiswa kuyedza kugovera magetsi eiyo inopomerwa yakamiswa insulator kana murabhoritari yekuona iyo yakamiswa insulator, uye kugonesa kunyatsoona iyo yakavanzika yemukati dambudziko reiyo insulator, kuvandudza kuvimbika kwekushanda kwegidhi remagetsi system, uye kugadzirisa. kushanda zvakanaka kwevashandi vemutsara vanoita kuyedza mhenyu.
Online Monitoring System yeMetal Oxide Arrester
Pane kazhinji nzira mbiri dzekutarisisa mamiriro ekudzivirira emagetsi emagetsi akakwira mune zviteshi: kutarisa pamhepo uye kurarama (inotakurika) online kuona.
GDYZ-301 Mheni Arrester Tester ndiyo yakakosha midziyo yekuyedza zinc oxide arrester electric performance.Yakakodzera kuyedza akasiyana voltage mazinga zinc oxide arrester ine kana isina magetsi, nekudaro kuona njodzi mukati memudziyo unokonzerwa nekunyorova kwemvura kana simbi oxide varistor (MOV) kuchembera.
GDYZ-301A Automatic Zinc Oxide Surge Arrester Tester ine pazasi mabasa matatu:
Ikozvino meter calibration yemonitor
Counter action test yemonitor